В Пермском крае появится завод по переработке овощей — Картофельная Система
Bilowga mashruuca, Shirkadda UralOvosch, waxay qorsheyneysaa inay ku bixiso 30 milyan oo rubles dhismaha. maalgashi u gaar ah iyo 170 milyan oo rubles. lacag soo jiitay.
Kulan ay yeesheen Golaha Ganacsiga iyo Hagaajinta Cimilada Maalgashiga, oo uu madax ka yahay madaxa Perm Territory Dmitry Makhonin, mas'uuliyiinta gobolku waxay ku taageereen dhismaha dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo iyo warshad lagu sameeyo dhirta lagu sameeyo ee tuulada Gamovo. Go'aanka Golaha, soosaarka cusub waxaa lasiiyay maqaamka mudnaanta mashruuca maalgashiga.
“Term Territory-gu waa inuu sida ugu wanaagsan uga faa’iidaysto suurtogalnimada dhul beereed. Qaybta degmada Perm ee degmada, halkaas oo mashruucan laga fulin doono, waxaa loogu tala galay in lagu beero waxsoosaarka beeraha, sidaa darteed go'aanka lagu meeleeyay mudnaanta koowaad waa mid macquul ah. Tani waxay u saamaxaysaa maal-gashade inuu codsado dhul dowladeed iyadoon la dalban, ”ayuu yiri Dmitry Makhonin.
Sher Soibov, aasaasaha mashruuca, aasaasaha shirkadda UralOvosch Company LLC, ayaa sheegtay in la qorsheynayo in la abuuro isku-dhaf casri ah oo soo-saar, kobcinta, baakadaynta iyo keydinta khudaarta dhul-beereedka miyiga Gamov. Si loo hirgaliyo qorshayaasha, 392 hektar oo dhul ah ayaa la amaahan doonaa, kuwaas oo badankood (376 hektar) dhul bannaan ah ay ku beeri doonaan baradhada, kaabajka, xididdada, karootada, iyo sidoo kale qajaarka, yaanyada, cagaarka ayaa lagu beeri doonaa lagu koriyo. Dhulka haray (16 ha) waxay dejin doonaan kaabayaal iyo wax soo saar. Kuwaas waxaa ka mid ah - warshad loogu talo galay soo saarista, karinta iyo baakadaha khudaarta miraha, kaydinta khudradda oo leh awood dhan 10 kun oo tan iyo bakhaar loogu talagalay alaabada la dhammeeyay.
Fikradda bilowga mashruucan, soosaarka cusub wuxuu suuragal ka dhigayaa in la bixiyo badeecada Permian kaliya maahan gobolka Kama, laakiin sidoo kale gobollada kale ee Ruushka. Isla mar ahaantaana, sida ay shirkadda UralOvoshch xaqiijisay, hirgelinta guusha ee mashruucu ma saameyn doono mashruuc maalgashi kale oo "beero" ah oo gobolka ka socda - dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo ee Permsky ee Chusovoy.
Aasaasaha shirkadani waa dhismaha warshaddeenna warshadeynta, iyo sidoo kale iskaashi lala yeesho bulshada sayniska ee Perm State Agrarian iyo Jaamacadda Teknolojiyada (PSATU),
Galina Efremova, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga xoolaha ee UralOvoshch LLC, ayaa xustay in saynisyahanada jaamacadu ay gacan ka geysan doonaan in lagu dabaqo tikniyoolajiyadda casriga ah ee lagu beero dhulka, kobcinta iyo kaydinta khudradda. Waxaan kaloo isticmaali doonnaa noocyada khudradda casriga ah ee ugu casrisan. Waxaan hore u samaynay dariiqyo iib ah oo alaabadayada ah, ayay tidhi.
Wadarta mugga maalgashiga ee mashruucu waa 200 milyan rubles, oo 15% (30 milyan rubles) milkiilayaasha shirkadu ay qorsheynayaan inay toos uga sheegaan maalkooda, 85% (170 milyan rubles) - lacag soo jiidatay. Kadib markay gaaraan awooda naqshadeynta, dhismaha isku dhafan ee beeraha ayaa qorsheynaya inuu soo saaro 8 kun oo tan oo khudaar ah dhul banaan, 150 tan oo khudaar ah dhul xiran iyo in kabadan 300 kun oo tan oo khudaar la qaliyey oo baakadeysan.
Mashruucan ayaa la rajaynayaa in la soo gabagabeeyo 2024. Iyada oo ay sabab u tahay furitaanka wax soo saar cusub oo dhinaca beeraha ah ee degmada degmada Perm, 107 shaqo ayaa loo abuuri doonaa.
LLC "Shirkadda UralOvoshch" ayaa shaqeyneysey ilaa 2016 waxayna ku hawlan tahay bixinta khudaarta si ay u helaan silsilada tafaariiqda iyo ururada jumlada ee gobolka Perm iyo gobollada kale. Sannadkii la soo dhaafay, dakhliga ka soo baxa iibka waxsoosaarka ayaa kor u kacay in ka badan 50% oo qiyaastii ahaa 300 RUB.
Source: Bogagga shabakadda ee guddoomiyaha iyo dawladda gobolka Perm
Tags: ka shaqaynta khudraddaGobolka Perm
Mashruuc maalgashi oo loogu talagalay ka shaqeynta iyo qaboojinta khudradda qiimihiisu yahay 545 milyan oo rubi ayaa laga hirgeliyay Volgograd
Makhaayada Moscow Twins Garden waxay bixisaa khamri khaas ah oo khudradeed
Chips-ka loogu talagalay kuwa cuntada ku jira
In gobolka Irkutsk qorsheeyo furitaanka aqoon-isweydaarsiga khudradda
Warshad loogu talagalay khudradda qallajinta ayaa ka furi doonta gobolka Volgograd
Yaanyada laga bilaabo yaanyada ilaa marinade